Saturday November 12, 2016 - 08:47:10 in Wararka by Super Admin
War qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda Keydka Mareykanka oo kaashanaysa macluumaadk ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa cunaqabateyn lagu saaray hoggaamiyaal katirsan Jamaacada Jihaadiga Fatxu Shaam iyo sheikh daaci ah oo wadanka Suuriy
Fatxu Sham waxay kamid ah xoogaga ugu awoodda Badan Suuriya
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in liiska waxa loogu yeero Argagaxisada lagu daray illaa iyo Afar Hoggaamiye oo katirsan Mujaahidiinta Fatxu Shaam balse horay loo oran jiray Jabhadda Al-Nusrah.
Mareykanku wuxuu sheegay in macluumaad sirdoon iyo dabagal dheer kadib ay ogaadeen in Fatxu Shaam ay tahay Jabhadda Al-Nusrah oo ah faraca Al Qaacidda ee Shaam sidaas daraadeed uusan waxba soo kordhin magaca cusub oo ay qaadatay.
Dadka liiska Argagaxisada lagu sumadeeyay xayiraadda dhaqaalane lagusoo rogay waxaa kamid ah 1-Sheekha Daaciga Mujaahidka ah Dr,Cabdulla Mux’med Bin Suleymaan oo Al-Muxeysini ku magac dheer kaasi oo kasoo jeeda wadanka Sacuudiga.
Sheekh Muxeysini ayaa lagu eedeeyay in uu kaalin muhiim ah ka ciyaaro ciidameynta dhalinyarada Suuriya islamarkaana uu ku xeyndaabanyahay hoggaanka Fatxu Shaam.
Sidoo kale waxaa saraakiisha liiska Argagaxisa lagu daray kamid ah:-
2-Jamaal Xusayn Zayniyah oo ah mas’uulka Fatxu Shaam u qaabilsan dhulka Buuralayda Alqalamuun xadka ay wadaagaan Suuriya iyo Lubnaan islamarkaana ku lug lahaaday qafaal lagula kacay dad reergalbeed ah.
3-Abduul Jashari oo lagu eedeeyay in uu yahay lataliye melleteri oo caan ku ah soo uruurinta dhaqaalaha Fatxu Shaam islamarkaana ay isku dhowyihiin Hoggaamiyaha Jamaacada Sheekh Max’med Al Jowlaani.
4-Ashraf Axmad Alcallaaq ayay Mareykanku ku eedeeyeen in uu yahay khabiir melleteri oo Jabhadda Fatxu Shaam uga mas’uul ah arrimaha melleteriga Gobolka Darcaa ee dhaca Koonfurta wadanka Suuriya.
Waa tallaabadii ugu horraysay ee Mareykanku uu qaaday tan iyo markii uu madaxtinimada wadanka uu ku guuleystay Doland Trump waloow uusan wali xukunka la wareegin waxaana la saadaalinayaa in Hoggaamiyaha cusub uu dardar gelin doono dagaalka islaam ladirirka ah.
Wadanka Suuriya ee Fatxu Shaam ka dagaallanto wuxuu kamid noqon doonaa meelaha ugu daran ee lafilayo in siyaasadda Mareykanka isbedel ku keento habsami u socodka dagaalka.